Home Arimaha Bulshada Ma Ogtahay Madaxweyne!!!
Mudane Madaxweyne ma ogtahay in shacabka Soomaaliyeed ay maanka ku hayaan dacwaddii muranka xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya oo weli aysan bulshadu wax war ah ka heynin meesha ay mareyso, lagaana sugayo inaad ka shaafisid?
La taliyayaashaada makuu sheegeen Ustaadoow in qaabka loo maray dhismaha maamul goboleedyada haatan jira iyo kuwa gacanta lagu hayo intaba in aysan waafaqsaneyn dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla? Iyaga oo Madaxweynayaal ah, adigana aad madaxweynaha madaxweynayaasha tahay in aad isku miis fariisataan in inta badan Barlamaankii ku doortay ay ka xunyihiin.
Mudane Madaxweyne mala socotaa in dad badan oo waxgarad ah ay la dhacsanyihiin howlaha dib udhiska ah ee dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya ay ka wadaan dalka, gaar ahaan caasimadda sida dowladda Carbeed ee Imaaraatka Carabta oo howlo badan ka wadda dalka iyo dowladda Turkiga oo waxqabadkeedu uu ka muuqdo caasimadda?
Madaxweynaheennoow mala socotaa in Soomaali badan ay isweydiinayaan mowqifkaaga ku aadan midnimada Soomaaliya, gaar ahaan burburkii ku yimid wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee Istanbuul kadib? Mase dareensantahay Mudane Madaxweyne in lagaaga fadhiyo in aad caddeyso maqaamka Muqdisho oo ay dadka qaar shaki gelinayaan?
Ustaadoow Alle hakula garab galo amaanada culus ee aad lugahaaga ku doonatay!!!
Previous articleDa’yarta Soomaaliyeed yaa u qoray Darxumada?
Next articleAadan Cabdulle iyo Goobaha Loogu Magac Daray